Soso-kevitra Momba ny Mpitarika tsara fa ho atao ny mamaky - JobDescriptionSample.org
Home / Tips / Soso-kevitra Momba ny Mpitarika tsara fa ho atao ny mamaky
Soso-kevitra Momba ny Mpitarika tsara fa ho atao ny mamaky
Jacob Aprily 18, 2016 Tips 1 Comment 780 Views
Efa hita ny tena any amin'ny tranga hafa ny toerana nanantena anao ho mpitarika fa tsy afaka hampiseho fahaizany mamokatra mpitarika? Tsy maintsy mandany liana raha tena tsy te-ho lasa mihoatra ny indray mandeha indray. Ny lahatsoratra manaraka dia mampiseho aminao izay mila izany mba hanampiana Anisan'ny mpitarika ny fahaiza-manao manokana ny fiainana andavanandro.
In Buy ho mpitarika mahafinaritra, tokony hanao ny marina. Amin'ny maha-mpitarika, ianao tokony ho fanaovana ezaka mba hitarika ny olona amin'ny Mazava ho azy fa tena tsara. Ny mpanara-dia hahita ny marina ka hankasitraka azy io. Matetika ianao no tsy maintsy miezaka manao ny marina amin'ny olona, araka ny tokony hitaona azy ireo mankany amin'ny manao ny marina toy ny araka ny tokony ho.
Izay tena zava-dehibe ny fahamarinan-toetra dia ny mpitarika. Mpitarika mahomby dia mendri-pitokisana. Rehefa miasa eo amin'ny fahaiza-manao ho an'ny mpitondra, ho azo antoka tsy tapaka ianao tso-po amin'ny tenanao sy ny olon-kafa. Misy lehilahy na vehivavy dia manana be dia be ho anareo ny fanajana bebe kokoa raha te avy izy ireo ary afaka miankina amin'ny mino anao.
Ny fitondran-tena manao toerana manan-danja eo amin'ny mamadika ho mpitarika tsara. Tsy maintsy ho comfy amin'ny safidy ataonao. Raha mino ianao fa tapa-kevitra ny ho tezitra ianao, foana niala nidina tamin'izany lalana. Na dia hisy lehilahy sy vehivavy miaraka amin'ny hafa ny fitondran-tena avy napetraka tao, tsy maintsy ho tsara ianao manao ny tsara olana.
Mba ho mpitarika orinasa tsara indrindra, mila tsy mba hampihenana ny fitondran-tena fotsiny hifaninana. Raha toerana misy dia tsy mankasitraka ny zavatra no manao ny fifaninanana, avy eo fa miakatra ho any aminareo mba hahitana lalana hafa Na izany aza, fa ho fifaninanana. Misy teknika hifaninana tsy mihena ny fepetra takiana. Raha mahatakatra ny fomba vaovao mba hijanona ao amin'ny lalao, Mety ho sambatra kokoa ianao.
Ny fifantohana eo amin'ny ekipa dia tena fanakianana toy ny mpitarika. Ataovy ny asa mafy mba hamaky ny mikasika ny fomba hanome fampaherezana sy mamorona fitaomam-panahy ao amin'ny olona no mitarika. Amin'ny maha-hafa ny fametrahana betsaka lasibatra ihany koa amin'ny asa tsirairay, aingam-panahy ny vondrona mba hanatanteraka araka ny tokony ho.
Aoka ho azo antoka fa manana tanjona ho an'ny ny raharaham-barotra toy ny feno. Ny olona rehetra dia tahaka ny manana zavatra afaka mitifitra ny, ary ho mpitarika lehibe hitarika ny mpiasa amin'izany lalana. Tsy afaka manome fanambarana fotsiny, ary mieritreritra fa ny asa vita. Mihazona volana ny volana tanjona fivoriana mba hiresaka momba ny fivoaran'ny rehetra.
Tsy maintsy mahazo fotoana isan'andro mba handinika sy hijery ny toe-po sy ny tontolo iainana amin'ny toeram-piasana. Manolora sasany ny mpanompo eo ambany fahefan'i mba hamela anao hahafantatra ny fomba tena mahatsapa. Aoka ianao ho misokatra ny tolo-kevitra, miresaka momba ny fanovana izay tsy maintsy namorona sy miasa amin'ny fanatontosana ny fifandraisana.
Mihaino ny mpitarika mihoatra lavitra noho resaka. Maha-mpitarika lehibe no hihaino izay rehetra olona tsy maintsy miteny. Henoy ny olona manao asa eo ambany ianao. Izany dia ahitana ny olana aminao. Figure ny zavatra rehetra dia nanao hoe: mpiasa momba izay ilay zavatra dia toy ary ahoana ry namana no mampiasa azy io. Mety ho gaga be hitanao avy amin'ny fihainoana.
Mahery mpitarika hahatakatra ny fahalemeny sy ny hery. Raha toa ianao ka mpirehareha, dia tsy. Aloavy avy fiheverana ny toerana tianao mba hanatanjahana.
Tena manana ny ny fahadisoana. Tsy misy olona tsara indrindra. Fividianana ny ny fahadisoana, hanitsiana azy ireo sy mianatra avy amin'izy ireo dia avo lenta ny lehibe mpitarika. Ho haneho azy ireo fa olombelona ianao, toy ny izy ireo. Raha mitoetra manaiky tsy fahombiazana tsy afaka mijery lehibe, dia manetry tena sy kaja.
Raha misy fahadisoana mitranga, lehibe mpitarika dia hampiasa ny endri-javatra toy ny Azo inoana mba hahita zavatra, fa tsy ny fahafahana mitsikera. Firesahana momba ny olana sy ny fomba hiatrehana dia hanampy azy ireo be.
Ho matoky ianao mitady foana mba hahitana ny fahaiza mpitarika vaovao. Haka lesona, na any amin'ny atrikasa amin'ny mahazatra fototra mba hahatakatra ny fomba fahaizana vaovao hitarika araka ny tokony ho. Misy fomba vaovao matetika mba hahatakatra sy ny fahaizany mba hampitomboana. Ho matoky foana ny tena zava-daty.
Mpiasan'ny mihevitra ny mpitondra mba hiresaka mahomby. Ny fihainoana dia ny fanakianana indrindra toetra ny mpitarika. Aza fanilihana eny mpiasa na mody fa tsy hihaino izay tsy maintsy miteny. Raha misy olona mitaraina, mitandrina izay izy ireo nanao hoe:.
Jereo ny hambom-pon'ny eo am-baravarana, ary tsy miaro ny lavitra avy amin'ny tantsambo. Tsy mbola mametraka ny tena eo amin'ny vondrona, na dia rehefa lehibe ianao vondron'olona iray. Aza miezaka manatanteraka ny zava-drehetra avy amin'ny ny tena. Amin'ny farany, ny tantsambo no mitady ho anao, na mizara anao, ka matoky tena mahatsapa ny rehetra mitsikera.
Mpitarika tsara dia zava-dehibe ny zava-bita ny mafy. Na izany aza, raha tsy nahalala fitarihana fitsipika, mety tsy ho afaka nahatsapa ho tena mpitarika. Manantena izahay fa ho voavaha olana mety amin'ny alalan'ny lahatsoratra ity.
Teo aloha Porofo teknisianina Job Description Sample
Manaraka Site Inspektora Job Description Sample